Qalbii Archives - Page 2 of 3 - Ibsaa Jireenyaa
March 7, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti tawbah jechuun badii irraa buqqa’uu fi gaabbun gara Rabbiif ajajamuutti deebi’udha jennee turre. Akkasumas, Istighfaara jechuun araarama kadhachuudha.Yeroo baay’ee namni kan jeeqamu fi hirriba dhabuuf qalbiin isaa yommuu badiin xurooftudha. Namni badii irraa buqqa’uun yommuu araarama kadhatu, xurii badii qalbii isaa irraa dhiqaa jira. Kuni immoo qalbiin isaa akka qulqullooftu taasisa. Qalbiin yoo qulqulloofte namni jireenya keessatti boqonnaa sammuu, tasgabbii fi milkaa’inna argata. Har’as itti fufuun faaydaalee tawbah fi istighfaara ni ilaalla:
March 6, 2019 Sammubani Leave a comment
Jireenya keessatti namni dadhabaa waan ta’eef fedhii isaatiin qoramuun daandii qajeelaa irraa daba. Daandii qajeelaa irraa yommuu dabuu rakkoo baay’een isa muudata. Rakkoolee kanniin keessaa: jireenya keessatti gammachuu fi kabaja dhabuu, sooranni isaa itti dhiphachuu, sodaa fi gaddaan guuttamuudha. Namni daandii haqaa irraa erga jallatee adabbiif of saaxilee booda, karaan adabbii kana jalaa itti bahuu danda’u tawbadha.
April 20, 2018 Sammubani One comment
Imaam ibn Al-Qayyim akkana jedha: Wantoonni afran armaan gadii haadho wantoota namoonni Rabbal Aalamiina irraa barbaadaniidha. Isaanis;
1. Sharrii (wanti badaan) amma keessa jiru akka isa irraa ka’u namni tokko Rabbiin kadhachuu
2. Sharriin akka isatti hin dhufne kadhachuu
3. Wanti keyriin (toltuun) isa bira jirtu akka itti fuftu fi irraa hin fudhatamne kadhachuu
4. Keyriin ammatti hin arganne gara fuunduraatti akka argatu kadhachuu Read more
December 30, 2017 Sammubani One comment
Torbaan darbee hiika istiqaama ilaalle turre. Yaadachisaaf istiqaama jechuun karaa qajeelaa fi haqaa Islaamaa irratti gadi dhaabbachuu fi itti fufuudha. Read more
“Istiqaama jechuun namni tokko haala Rabbiin (subhaanahu wa ta’aala) ajajetti shari’aa Rabbii irratti gadi dhaabbachuu fi hordofuudha. Kuni immoo iklaasan (Rabbiif qulqulleessun) kan durfame ta’uu qaba.” Read more